Indlela yokujongana nokuxilwa komyeni wakhe
Enye yeentlekele ezinkulu kwiintsapho zidakwa. Emva komyeni onothando, uyise wentsapho, ngokukhawuleza eba "isilwanyana" Uqala ngokukhawuleza ukuba uxhomekeke kotywala. Xa isiqalo sokuqala kobutywala siqala, akukho mntu unokuqonda ukuda ngoku. Oko wayesekude kwakulungile, inokwethenjelwa kwaye ayikwazanga ukuluvuyisa ulonwabo olukulo mntu. Kwaye kwenzeka ntoni ngoku, ukusuka emsebenzini utywala ngonaphakade, ngamanye amaxesha abahlobo bakhe bamzisa ngokusemthethweni. Kulungile, ukuba uya ekhaya utywala akaqali ukulungiselela ukulwa nekhaya, kwaye wena kunye nabantwana akumele ufihlwe kuye kumelwane. Yaye ukuba uqala ukubonisa umlingiswa wakhe? Ekuseni, uvuka, udinga ukunxila, ukhangele ngomsindo, ukuba unqabile ukumnika imali yesikhumba, uye wayidla isidleke sakhe ixesha elide, kwaye ufanele uphile umvuzo wakho. Indlela yokuhlala nale nto? Indlela yokujongana nokuxilwa komyeni wakhe? Le mibuzo ibuzwa ngabafazi abaninzi abahlala nomyeni onxilisayo.
Into yokuqala efika engqondweni yakho xa uqaphela ukuba umyeni wakho uqala ukusela kuphela ngeeholide, kodwa nangemini yeveki, ngumtshato, kodwa kufuneka uqaphele ngokwaneleyo ukuba le yindlela yokuphela. Eli bhinqa naye uyindoda, ukhangele indlela elula kakhulu yokuphuma kwimeko, umyeni uyifumana kwibhotile, kwaye umfazi ngokuthula uhlukanisile nomnxila. Kodwa oku akusoloko kuyindlela yokuphuma, ngokuqinisekileyo kulula kakhulu kwaye kulula kakhulu. Okanye uzame ukunceda indoda yakho ethandekayo, nangona ngoku kunzima ukumbiza ngokuthi uyithandayo, kodwa kunjalo.
Into ebalulekileyo kukuba kufuneka ufunde, ukuba awufuni ukuba umyeni wakho aphuze, zama ukuhamba ngaphantsi kweendwendwe, okanye uye kulezo ndwendwendwe ezingaqali ukusela utywala emzimbeni. Musa ukulungiselela iiholide ezinjalo ekhaya, xelela bakho abahlobo ukuba unomthetho owomileyo kwindlu yakho ngoku. Ukuba ngaba ngabahlobo bakho bokwenene, baya kukuqonda. kwaye ukuba ngabahlobo bacinga, ngoko kutheni kufuneka?
Umgaqo olandelayo kukujonga ingxaki evela ngaphakathi ngaphakathi, cinga ukuba umyeni akaqali ukusela njengaloo nto, zikho izizathu ngezihlandlo zezi zinto. Amadoda abanjengabantwana, abasengozini kakhulu, abasondele kakhulu entliziyweni baqonda zonke iingxaki, ukuba abaziqondi ekhaya, ngoko uya kubahlobo ukuba bahlale kwibhotile, okanye bazifumene ikosikazi. Umyeni wakho ukhethe isisombululo sokuqala kuzo zonke iingxaki, waqala ukusela. Xa ehlambulukile, zama ukufunda ngeengxaki zakhe ngokukodwa, ukuba uxinzezelekile. Khumbula, ukususela xa waqala ukusebenzisa into eninzi kwibhotile, xa ingxoxo enobungane ngaphezu kwebhotile yewayini elungileyo, yaba ngumncintiswano wokusela utywala. Yintoni eyabangela ukungcola okunjalo komntu oqhelekileyo? Yilapho uhlalutya ubomi bakho bonke nomyeni wakho, uthetha kuye intliziyo ngentliziyo, yilapho mhlawumbi kukho impendulo kumbuzo wakho. Yiba kuye ngeli xesha lokulungelelanisa - umama. Awuyikushiya umntwana wakho kwimfesane yengozi, ngoko akufanele uhambe nomyeni wakho, kuphela onokumnceda.
Ngokuqinisekileyo, kusekho indlela yokuphuma-ikhowudi yokuxhomekeka kotywala. Kodwa kukho into efanelekileyo ukuhamba kuphela xa umyeni wakho evuma ngokwakhe ukuba utywala. Ukuxwala kwakhe kukutshabalalisa yonke into, intsapho, umsebenzi, abahlobo abasondeleyo baqala ukuguquka kuye. Kwakhona, kufuneka umncede, abe yingcali yeengqondo kuye. Kodwa ukukhonkxa kwindlela yokuxhomekeka kotywala kungekhona ukukhetha. Kunyaka kamva, umyeni wakho unokunxila kwakhona kunye nangaphezulu, kwaye angakwazi ukuphula kwaye akanako ukuma ixesha.
Ukuqonda indlela yokujongana nokuxilwa komyeni, kufuneka uqonde kuqala isizathu. Emva koko jonga iziphumo kuyo. Kwaye kubaluleke kakhulu, qiniseka ngamakhono akho, nokuba uya kuba nako ukukhuphisana nomyeni wakho. Yikholelwa, kwaye uya kuphumelela.
Ukucacisa uluntu: 5 iingcamango malunga namadoda amakhulu
Ukutshintsha ubudlelwane kwintsapho kunye nokuzalwa komntwana
Indlela yokuhlaziya ubuhlobo kunye nomfana
Indlela yokuchitha ixesha elingasetyenziswanga
Ngaba ndimele ndixelele lo mntu ngeengxaki zam?
Ukwakha ubudlelwane nomntu onomona
Umbala omnyama ngaphakathi
Iresiphi yengulube ehovini
UTim Burton noJohnny Depp
Ikhekhe lePear nge-almond cream
Indlela yokwenza ikati ihambe kunye nenja
Ingongoma yombono kwindoda
USteshu Malikov uhlekisiwe ngenxa yeenqanaba ezi-5 kwiimathematika
Ikhekhe nge capelin
I-horoscope yesondo: i-Libra, i-Scorpio, i-Sagittarius
Isibheno ngeMozzarella ushizi
Umfana akanandaba nantoni na. Yintoni endiyenzayo?
Isobho somsi kunye namazambane
Inkomfa yokuzivocavoca ukuphuhliswa kweentlungu zamantombazana
Amacandelo amabhinqa kunye namaqhinga
Izibini ezi-8 zeefestile zefashoni ekwindla nasebusika
Ukuyila ngesitayela sobuhlanga